डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु ! – Etajakhabar
डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु !
करिब डेढ वर्षदेखि बन्द मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु गर्ने विषयमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिबीच दोस्रो दिनको छलफल बुधबार सकिएको छ ।
‘वार्तामा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेका छौं । केही विषयमा सहमति नजिक पुगेका छौं ।’, बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रममन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो,‘ शुक्रबार निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन, सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित
Posted on: Thursday, September 12, 2019 Time: 9:26:15